Walaalkayga wuxuu ii sheegay: In uu galmo la sameeyay niman. Aniga oo ah (labb, 15 sanno jir a) ma fahmayo arinkan. Ma tahay mid baashaal ah? – Tips for refugees
Previous Previous post: Aniga waxaan ahay (wiil 16, sanno jir ah) waxaan maanta galmo la sameeyay saaxiibtayda waxaana dhaawac gaarsiiyay xubinkayga taranka. Wuu jabay waxaana maqlay cod jabitaan ah. Hadda wuu bararsanyahay midabkiisana waa buluug. Aad ayuu u xanuunayaa. Miyuu iga jabay?
Next Next post: Aniga oo ah (wiil,16 jir ah) waxaan leeyahay saaxiibad. Waxaynu isku jecelnahay si aad ah waxaana aad u jecelnahay in aynu isku soo dhowaano oona isla baashaalno. Hadda waxaynu doonaynaa in aynu inbaddan galmo isla samayno. Sideen ugu samayn karnaa sida saxda ah? Siduu ku geli karaa xubinka taranka raga gudaha xubinka taranka dumarka?